China Cement Silo Ukwakha kanye Factory | UJusheng
Asizayo Usimende Silo
Butterfly Valve Ukuze Usimende Silo
Usimende Silo Auger
Usimende ongosilika, obizwa nangokuthi amathangi kasimende, angahlukaniswa futhi abe usimende ohlukanisiwe nesilo sosimende esidibeneyo. Split silo ngokuvamile ilungele ukuthuthwa kwesitsha ukonga izindleko zokuhamba nomjikelezo. Usimende usetshenziswa kanye nesitshalo sokuxhasa ukhonkolo esisekelayo, futhi umsebenzisi ubuyisela amasilosimende ngamakhono ahlukene nobungako ngokuya ngokukhishwa kwesitshalo sokuxuba. Ingenye yezingxenye eziyinhloko zesitshalo sokuxuba ukhonkolo. Ngaphezu kokugcina usimende, futhi ingagcina nezinto zokwakha ngobuningi, njenge-fly ash, i-ore enhle, udaka owomile, okusanhlamvu, njll. Isilo sinezimpawu zokuvikela imvula kuphela, ubufakazi bomswakama nezisebenziseka kalula. Ingasetshenziswa ngamaphayiphu evemvane, izishuduli zokuhambisa, imikhono yokuxhuma eguquguqukayo, njll., Ukuhambisa izinto ezisuka esiseleni ziye ebhakedeni lokulinganisa. Isilo ngokuvamile siqukethe isiqoqi sothuli kanye ne-valve yokukhipha ingcindezi. , Izinga eliphakeme neliphansi leveli, i-flow aid air bowl, i-valve esangweni levemvane, idivayisi yokuhlunga kanye nekhabethe yokulawula. Izinto zokuhamba ezivaliwe ukuqinisekisa indawo yokusebenza engenazintuli.
Isibonelo No. Amandla Ububanzi besililo Ukuphakama kwesilo Ukukhishwa kokuphakama
I-DKS100T 100T 3.16m 17.2m 4.5m
Imodeli yeSilo Amandla ezitshalo Inani lesitshalo ngasinye
I-DKS50T / 100T 60m³ / h 1/2
I-DKS100T 90m³ / h 2/3
I-DKS100T / 120T 120m³ / h 1/4
I-DKS200T / 300T 180m³ / h 3/4
Usimende silo wenziwe kakhulu ngesitshalo sensimbi esingu-Q235 ukugcina usimende. Inezinhlobo ezimbili, isilo esine-bolted & silo esine-welding, amandla wesilo avela ku-30t-1000t.
Isiloji sikasimende sifaka lezi zingxenye ezilandelayo: abangaphandle, ipulatifomu yokulungisa, umzimba wamathangi, iladi, i-guardrail, ipayipi lokuphakela, isiqoqi sothuli sophahla, i-valve yokukhipha ingcindezi, igeji yezinga eliphakeme neliphansi, i-flow aid gas bowl, i-discharge gate butterfly valve, isihlungi sedivayisi Futhi lawula ikhabethe
I-Flake Indawo Yokugcina Usimende
1. Isililo esintekenteke kulula ukusifaka nokusiqaqa.
2. Ingapakishwa futhi ihanjiswe kalula.
3. Strong ukubekwa uphawu ukusebenza.
4. Ukubukeka okuhle.
Ukufakwa: Isililo sesamente siqukethe amapuleti ensimbi, axhunywe ngamabhawodi, okulula kakhulu ukuwahlanganisa nokuwaqaqa. Abasebenzi abanolwazi bangaqedela ukufakwa kwesilo samente ngokusebenzisa amavidiyo wokufaka noma imiyalo yokufaka.
Amandla: I-bolt samente silo ingasetshenziselwa amathani angama-50, amathani ayi-100, amathani angama-200, amathani angama-300, amathani angama-500, amathani ayi-1000. Usayizi wokugcina wakhelwe ngokuya ngemvelo yendawo kanye nezidingo zendawo, ngakho-ke isixazululo ngasinye se-samente silo sihlukile kukhasimende.
uma unemibuzo，pls xhumana nathi: sales@dongkunchina.com
Isilo Esihlanganisiwe Ukuhlanganiswa Komkhiqizo
1. Amathangi kasimende ngokuvamile asetshenziswa njengemikhiqizo esekelayo yezitshalo zokuxuba ukhonkolo (izakhiwo).
2. Kufanelekile ukulayisha usimende omningi nomlotha owomile wezimpukane. Inezici zokuvikela imvula, ukufakazela umswakama futhi okulula ukuyisebenzisa; ukucaciswa nobukhulu kungenziwa futhi ngokuya ngezidingo zamakhasimende.
3. Ngokuvamile kuyisakhiwo sokwesekwa okuyindilinga, esinemishini yokususa uthuli engxenyeni engenhla ukuvimbela ukuvuza kothuli, kanye nedivayisi ephula ikhothamo engxenyeni engezansi ukuvikela impuphu ekuhlanganiseni futhi yenze impuphu ithulule kahle. Ibuye ifakwe okokusebenza kwemishini yokuzwa izinga, engalawulwa nganoma yisiphi isikhathi. Ukusetshenziswa kwempahla.
4. Ngokuvamile, kusetshenziswa iloli elihambisa usimende ngobuningi ukuthumela igesi eyimpuphu esiseleni; ngokwesakhiwo sesilo samente, ngokuvamile kunezindlela ezimbili zokwehlisa okokusebenza, eyodwa ukuxhuma ingxenye engezansi ku-screw conveyor, bese usebenzisa i-screw conveyor ukuthumela impuphu ibe yimpuphu. Okwesibili ukusebenzisa ukuhanjiswa kwomoya (kwamathangi kasimende anezakhiwo ezikhethekile).
5. Isiloji sesamente sinesakhiwo esilula, ukufakwa okulula, indawo encane yaphansi, utshalomali oluphansi, ukuhamba okuqinile, njll.
6. I-bolt sement silo ingasetshenziselwa amathani angama-50, amathani ayi-100, amathani angama-200, amathani angama-300, amathani angama-500, amathani ayi-1000. Usayizi wokugcina wakhelwe ngokuya ngemvelo yendawo nezidingo zendawo,
Okuzenzakalelayo Aggregate Batching System, Okuzenzakalelayo Isilinganiso Batching Machine, Izingxenye Zokukhonkolo Ezihlanganisiwe, Isistimu Yokuqoqa Okuhlanganisiwe, I-Automaticaggregate Batching Umanyolo Wokuxuba, Isistimu Yokulinganisa Yokuhlanganisa Okuhlanganisiwe,